Lalao goavana isan’ireo andrasan’ny rehetra amin’ity faran’ny herinandro ity ny lalao miverina izay hihaonan’ny Japan Actuel’s sy ny Ajesaia...
...izay tafiditra ho ao anatin’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga eo amin’ny taranja baolina kitra.
« Mbola tanora ny mpilalaonay, saingy manana teknika ambonimbony kokoa tamin’ny fomba nitaizana azy. Inoako fa hampiakatra ny hambom-pon’izy ireo ny efa fandresena azon’ny Tana Formation tamin’ity ekipan’ny Japan Actuel’s ity. Inoako rahateo fa hadio ny lalao fa tsy tahaka ny tamin’ny lalao mandroso”, hoy I Jeremia Randriambololona, mpanazatra ny Ajesaia, izay efa mahatoky sahady ny fandresen’izy ireo.
Azo heverina ihany koa fa fitsapana faharoa ho an’I Bruno Randrianarijaona, mpazatra ny Ajesaia teo aloha, izay nifindra any amin’ny Japan Actuel’s ity fihaonana ity.
Samy manana ny mpanohana azy mafana fo rahateo ireto ekipa roa ireto, izay inoana fa samy hihoby ny azy am-pilaminana fa tsy hisy ny fifandrangitana toy ny niseho tamin’ny lalao mandroso.
Ho an’ny ekipan’I Madagasikara dia I Boto, izay laharana fahatelo amin’ireo mpilalao mpamono baolina betsaka indrindra hatreto, no tsy afaka milalao noho ny karatra mavo indroa azony.
I Pierralit, izay vodilaharana afovoany ho an’ny Ajesaia kosa no tsy afaka milalao ihany koa ho an’ny ekipan’I Taninkatsaka.